Dymethazine ụra (DMZ) (3625-07-8) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Ihe nkuzi / Dymethazine (DMZ) ntụ ntụ
SKU: 3625-07-8. Category: Ihe nkuzi
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram na usoro nchịkọta nke Dymethazine (DMZ) (3625-07-8), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Dymethazine (DMZ) ntụ ntụ bụ ezigbo ụlọ maka enweghị njigide mmiri, ịba ụba nke ọma, yana ịdaba uru akwara zuru oke. E gosipụtara onyinye a na-egosi na enwere otu ma ọ bụ nnukwu ụlọ ahụ karịa Testosterone propionate, winstrol, na anadrol.
Dymethazine (DMZ) uzuzu uzuzu
Dymethazine (DMZ) ntụ ntụ isi agwa
aha: Dymethazine (DMZ) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C42H68N2O2
Ọbara arọ: 633.011
Dymethazine (DMZ) uzuzu eji eme ihe na steroid
Dimethylzine ntụ ntụ makwaara dị ka DMZ ntụ ntụ.
Dymethazine ntụ ntụ Usage
Maka ndị ọrụ ọhụrụ:
Izu 1: 15mg kwa ụbọchị
Izu 2 ruo 4: 30mg kwa ụbọchị
Maka ndị ọrụ nwere ahụmahụ:
Izu 1: 30mg kwa ụbọchị
Izu 2 ruo 3: 30mg kwa ụbọchị
3 4 na 30: 45 na XNUMXmg kwa ụbọchị
Ịdọ aka ná ntị na ntụ ntụ Dymethazine
Ọ bụ ezie na Dimethazine nwere ike ọ gaghị ewepụ nsogbu ndị na-adịghị mma ma e jiri ya tụnyere ndụmọdụ ndị ọzọ na ụbụrụ anabolic, ọ dị oké mkpa ka ị nweta usoro ọgwụgwọ ọkpụkpụ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ PCT na-aga mgbe o jiri ya iji gbochie otu. Inwe nkwado nkwado na-adịghị mkpa mgbe ị na-agba ígwè na Dimethazine, ma akwadoro maka ịkwalite mmetụta nrụpụ.
Ịme usoro ọgwụgwọ nke usoro mgbasa ozi (PCT) dị mkpa mgbe ọ na-eso Dimethazine na-agba. A ghaghị ịbanye ya ụbọchị mgbe ị gachara ikpeazụ nke prohormone a ma na-agba ọsọ maka ma ọ dịkarịa ala izu 4 iji weghachiteghachi ọnọdụ ahụ nke hormonal ahụ gị na-eme ka ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị. Enwe PCT na onye na-edozi ma ọ bụ ngwaọrụ SERM nke nwere estrogen anabatara bụ nke a na-atụ aro ya mgbe ị na Dimethazine na-agba ịnyịnya.
Ngwá Ike DMZ
Dymethazine ntụ ntụ Marketing
Esi zụta ntụ ntụ Dymethazine (CAS 3625-07-8); zụta DMZ ntụ ntụ si AASraw
AAS raw na-enye 98% Dymethazine / DMZ raw ntụ ntụ na bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka oral ojiji.
Ntụziaka ntụ ntụ Dymethazine